Ururka Al-Shabaab ayaa asbuucii lasoo dhaafay weerar ku bilowday qarax ku qaaday hotelka DusitD2 kaasoo ku yaal Magaalada Nairobi ee Caasimadda dalka Kenya. Weerarkaas ayaa la aaminsan yahay inay ku dhinteen dad aad u badan oo tiradooda gaarayo illaa 24 qof inkastoo laga yaabo inay dhimashada intaas ka badan tahay Haddaba waxaan warbixintaan idinkugu soo gudbin doonaa afar qodob oo ...
Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in uu bartamaha sanadka soo socda ee 2019-ka shaqo billaabi doono Saldhigga Milatari ee ay ka dhiseyo Magaalada Berbera. Wargeyska Bloomberg ayaa oo soo xiganaya saraakiil ka mid ah dowladda Imaaraadka Carabta iyo mas’uuliyiin ka mid ah Maamulka Somaliland ayaa sheegay in saldhigga uu si rasmi ah u shaqo billaabi doono Bisha June ee sanadka ...
Wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda SoomaaliyaMaxamed Aadan Ibraahim (Fargeeti) ayaa sheegay in qandaraaska hore loo bixiyey ee uu ka hadlay wasiirkii hore ee Amniga Xildhibaan Cabdirisaaq Cumar Maxamed uu ahaa mid hab sax ah loo maray, haddii ay cillado kusoo baxeena ay yihiin kuwo isaga ku cusub. Hay’adda NISA ayaa sheegtay dhowaan inay hakisay qandaraaska oo uu bixiyey ...
Dowladaha Mareykanka iyo Israel Oo Ka Cabsi Qaba in Dhaxal Suge Bin Salmaan Uga Baxo Qorshahooda Ku Aadan In Dowlada Islaamka..!!!!
Madaxda Mareykanka iyo Israel ayaa wallaac ka muujiyey dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan, oo ay u arkaan in uusan xorriyad buuxda u heli doonin dhisidda xiriirka Israel iyo Carabta dariska la ah, kaddib dilkii wariye Jamaal Khaashuqji, sidaas waxaa warisay Washington Post. Ergeyga Bariga dhexe ee Donald Trump, ahna wiilka uu sodoga u yahay, Jared Khushner, waxa ...
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka codsaday dacwad oogaha guud ee Sucuudiga inuu baaritan ku sameeyo ciddii uu kasoo fulay amarka ah in la dilo weriye Jamaal Kaashogji. Erdogan wuxuu sheegay in dacwad oogaha Sucuudiga laga doonayo inuu shaaca ka qaado ciddii soo dirtay 15-ka qof ee lagu tuhunsan yahay inay Jamaal Khaashogji ku dileen gudaha qunsuliyadda Sucuudiga ...
Dowladda Mareykanka ayaa war kasoo saartay doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, ee la filayo inay Baydhabo ka dhacdo 17-ka bishan. Qoraal kasoo baxay howl-galka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Washington ay soo dhoweeneyso aasaaska Guddiga Doorashada ee Maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo xulashada kooxda hogaamineysa. “Waxaan rajeyneynaa in November 17 ay dhacdo ...
Madaxweyne Ku Xigeenka Maamulka Puntland C/xakiin Xaaji Cumar (Camey) ayaa ka Hadlay khilaafka u Dhaxeeya dowladda Federaalka iyo maamul Goboleedyada, isagoo ka hor yimid go’aanadii maamul Goboleedyada ee shirkii Garowe. C/xakiin Camey ayaa madaxda maamul Goboleedyada dusha u saray inay sabab u yihiin khilaafka kala dhaxeeya dowladda Federaalka, isagoo sheegay in wixii ka soo baxay Shirkii Garowe uu ahaa ...
Maleeshiya ururka Al-Shabaab ayaa deegaanada Jubbada Dhexe ka billaabay tallaabooyin ay isugu yeerayaan qabaa’ilka, ayaga oo hor-dhigaya dalabyo culus, oo beelaha ay aad u dhibsadeen. Mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa Warbaahinta Qaranka u sheegay in Al-Shabaab ay ku amreen in Qabiil Qabiil ay dadku isku qaybiyaan ka dibna ay keenaan Hanti waxa ay heestaan. “Qabiil kasta ...
Shalay gelinkii damabe ayuu maalmo kadib dib ugu laabtay Magalada Dhuusamareeb Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle (Xaaf) waxaana uu ugu baaqay Shacabka Dhuusamareeb inay u diyaar garoobaan Shirweynaha Qaran ee ka dhacaya Magaaladaas. Hayeeshee iyada oo taasi ay jirto ayaa waxaa xalay war-Saxaafadeed soo saaray Madaxa Xukuumadda Maamulka Galmudug Maxamed Shaakir Cali Xasan, wuxuuna ku sheegay in ay Aqoonsan ...
Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Somalia Axmed Ciise Cawad ayaa shaaca ka qaaday inay jiraan shaqaale ka tirsan dowlada oo aan qaadan wax mushaar ah. Wasiir Cawad, ayaa sheegay in shaqaalaha aan qaadan mushaarka ay kamid yihiin kuwa ka howlgala safaaradaha Somalia ay ku leedahay caalamka qaarkood. Waxa uu Wasiir Cawad tilmaamay in mudada ay ogyihiin ilaa ...